LG na-enye panel Huawei Mate 30 Androidsis
LG bụ ụlọ ọrụ na-enye ihe ngosi OLED na Huawei's Mate 30 usoro
Dabere na akụkọ ewepụtara n'oge na-adịbeghị anya, LG Display na-enye ogwe OLED na usoro adịchaghị nke smartphones agbarịta 30 site Huawei.
Huawei ga-ewebata usoro Mate 30 na Munich, Germany, na September 19, ụbọchị nke gafere naanị ụbọchị atọ. Ndị a mobiles ịmụta ndị 'Waterfall screen' imewe -miri ka ya Vivo Nex 3- nke na-ewetara akụkụ nke akụkụ abụọ nso na ogo 90. Na mbụ, a kọrọ na Samsung Display bụ onye na-eweta ogwe OLED na usoro Mate 30 nke ụlọ ọrụ China, mana nke a yiri ka ọ bụ ụgha.
Otu onye ọrụ si n'aka onye ahịa ama ama ama ama na ahịa China kwuru, sị: "Ahụghị m OLED ọ bụla nke BOE mere na usoro Mate 30." Okwesiri ighota na mmeputa ihe ngosi nke cascade choro ihe nkpuchi ihe eji emeputa iko na uzo ozo.
Ogwe OLED maka P30 Pro ọ bụ ndị ọrụ ngosi ngosi BOE bụ ndị nyere ọrụ n'ụzọ zuru oke na mbido afọ a. Huawei wepụrụ LG ihuenyo na nkeji ikpeazụ n'ihi nsogbu dị mma. N'oge ahụ, LG Display kwụrụ ọtụtụ ijeri ụgwọ maka ndị mmekọ ndị tinyere aka na mmepe nke P30 Pro. Huawei na-ewerekarị OLED panel si Samsung Display LG Display na BOE wetara ogwe OLED na-agbanwe agbanwe.
N'aka nke ọzọ, LG Display ekpebie ịmalite inye OLED maka iPhone na Apple na ọkara nke abụọ nke afọ a. Dị ka data ị ga-eburu n'uche, dị ka ụlọ ọrụ nyocha nke ahịa IHS Markit si kwuo, òkè ahịa nke mbupu OLED mobile na nkeji nke abụọ nke afọ a bụ 82% maka Ngosipụta Samsung, 12% maka BOE na 2% maka LG Display. Ahịa LG Display na mpaghara nke atọ na nke anọ nke afọ a na-agwụ na 4% na 11%, n'otu n'otu. O nwere ike ịbụ na ọ ga-ebu ibu n’ọnwa ole na ole na-abịanụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » LG bụ ụlọ ọrụ na-enye ihe ngosi OLED na Huawei's Mate 30 usoro
E gosipụtara Xiaomi Mi 9 Lite